Global Voices teny Malagasy » Fikambanana Miezaka Mamerina ny Asan’Ireo Mpifindramonina Tany An-Tany Nialàny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Avrily 2017 4:59 GMT 1	 · Mpanoratra Public Radio International Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Sendikà
Semere Tsegay, mpanampy mpitsabo miofana ao Eritrea, nandray anjara tamin'ny fandaharana tao amin'ny Oniversite Highline tao Burien, Washington, izay manampy ireo mpifindramonina mba hiverina indray amin'ny asa nataony tany amin'ny fireneny. Sary: Anna Boiko-Weyrauch
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 30 Martsa 2017 ity tantara avy amin'i Anna Boiko-Weyrach  ity. Navoaka eto indray izany ho anisan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Global Voices sy ny PRI.
Te hirehareha momba ny tenany indray i Ali Mufrej.
“Isaky ny mijery fitaratra aho dia hoy aho hoe: ‘Eh, dokotera ianao , tsy maintsy ho dokotera indray ianao,'” hoy izy. Avy any Iraka i Mufrej. Ao Baghdad, manindrona fanatoranana amin'ny fandidiana an'arivony izy, vokatry ny fandidiana fiterahana, ny ratran'ny lozam-pifamoivoizana, ary ny ratran'ny bala .
Mahatsiaro ny endriky ny marary i Mufrej, rehefa miasa ilay zava-mahadomelina . “Ny fitahiana mampihetsim-po eo amin'ny fijerin'ny marary,” hoy izy. Nanomboka nivavaka ho azy izy ireo satria nalainy avy hatrany avokoa ny fanaintainana rehetra , hoy Mufrej.
Fa amin'izao fotoana izao, lavitry ny taniny izy ary ny tranonkala eBay no tena loharano fidiram-bolany izay hivarotany piesy notsimponina tamin'ny fiara tsy miasa intsony avy ao amin'ny fitoeran-korontan'ny rahalahiny sy ny entana shinoa nohafarana. Miantso izany ho asa fiavotan-tena i Mufrej .
Ho an'ny mpifindramonina toa azy, matetika no votsotra hatrany ny asa, ary manasarotra azy ho an'ireo asa mila matihanina voaofana, toy ny dokotera, mpanampy mpitsabo sy ny injeniera mba hiasa amin'ny sehatra tandrify azy ny sakana ara-toekarena sy ny sakana hafa.
Manana mari-pahaizana tany amin'ny oniversite ny ampahatelon'ny olona natera-bahiny tao Etazonia, tsy dia manana herijika loatra  izy ireo mihoatra amin'ireo matihanina nateraky ny Amerikana (Etazonia) hiasa amin'ny sehatra tandrify azy, araka ny Ivontoerana momba ny Politikan'ny Fifindra-monina, izay miantso ny tranga ho “fahaizam-bery maina.” Miezaka ny hanova izany ny tambajotran'ny fikambanana iray.
Zava-dehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina amin'ny ankapobeny sy ho an'ny mpifindra monina ihany koa ny fanampiana ireo tena matihanina voaofana avy any ivelany mba hiverina amin'ny sehatra mifanandrify amin'ny fahaizany, hoy i Liz Patterson, lehiben'ny Foibe Tongasoa Indray  ao Washington Avaratrandrefana ao amin'ny Oniversiten'ny Vondrom-piarahamonina Edmonds akaikin'i Seattle. Iray amin'ireo foibe fanovozam-pahaizana miisa 11  any Etazonia izy io izay matetika hita any amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Oniversite .
Koa satria mikarakara olona maro avy amin'ny fiteny sy ny kolontsaina samihafa ny hopitaly sy ny toeram-pitsaboana dia mety hahatonga ny rafitra iray manontolo ho tsara kokoa ny mampiasa olona manao fikarakarana ara-pahasalamana mitovy fiaviana, hoy izy. “Matahotra ny olona rehefa marary sy ​​rehefa maratra,” hoy i Patterson. “Azontsika atao farafaharatsiny ny mampahazo antoka azy ireo raha olona mitovy fomba fijery ara-kolontsaina na mitovy fiteny [no mikarakara], ary manatsara ny endriky ny fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny izany.”
Fa alohan'izany dia tsy maintsy mamakivaky sehatra maro ny vahiny mpiasam-pahasalamana voaofana aloha ahafahany miasa amin'ny ambaratonga nisy azy teo aloha indray .
“Mety ho dingana lava izany arakaraka ny firenena niaviany, ny traikefa nananany, sy izay asa tiany hatao. Mety ho dingana andaniam-bola be, “hoy i Patterson.
Ny hoe andaniam-bola be dia midika hoe 1.000 $ na mihoatra ho an'ny mpanampy mpitsabo ary an'aliny — raha tsy an'hetsiny — dolara ho an'ny dokotera sy ny mpitsabo nify.
Mety ho sakana lehibe na dia ny fakana ny naoty tany am-pianarana teo aloha fotsiny aza, hoy Patterson.
Nety indrindra ny nataon'i Mufrej. Niezaka izy mba hahazoana ny naoty tany am-pianarana teo aloha avy any an-tranindrazana ary tena nandeha fiaramanidina mihitsy aza izy nanaovana izany . Na izany aza, mbola nipetraka ny olan'ny fanjakam-birao.
“Mieritreritra aho fa hitady fomba hafa hialana amin'izany, fa mbola tsy fantatro anefa izay fomba ho atao . Mbola mieritreritra hatrany aho, “hoy i Mufrej.
Tsy maintsy namerina ny fianarana ho dokotera tany Etazonia indray i Mufrej rehefa avy naharay ny naotiny, nahazo diplaoma izy ary nanao fangatahan'asa (ary voaray avy eo) tao amin'ny toeram-pitsaboana iray.
Nikaroka tari-dalana tany amin'ny Foibe Tongasoa Indray  ao Puget Sound ao amin'ny Oniversiten'ny Highline atsimon'i Seattle i Mufrej. Tany amin'io toerana io, indray alatsinainy alina, vao haingana, nanomana ny fanadinana nasionaly hahazoana mari-pahaizan'ny mpanampy mpitsabo ny vondrona mpanampy mpitsabo misolo tena ny firenena samihafa tahaka an'i Ethiopia, Kazakhstan, Nepal ary Filipina .
Tsy maintsy mandalo izany izy ireo hiasana any Etazonia.
I Semere Tsegay no mpianatra iray hafa, mpanampy mpitsabo, izay niofana tany Eritrea ary mitsiky izy rehefa mahatsiaro niasa tamin'ny fampiterahana. “Tiako ny manompo ny olona amin'ny asako,” hoy izy.
Fa mba ahafahany manampy amin'ny fampiterahana indray, dia tsy maintsy manana ny fiofanana iraisam-pirenena zahan'ny orinasa tsy miankina iray aloha izy, ary manao fanadinana amin'ny teny anglisy sy ny fanadinan'ny mpanampy mpitsabo hahazoana diplaoma .
Niezaka mafy tamin'izany i Tsegay, mitondra kahie matevina sy ny solosainy any amin'ny famakiam-boky hianarana isan'andro izy. Mandritra izany, sady miasa alina ihany koa i Tsegay rehefa faran'ny herinandro any amin'ny trano fitaizana beantitra, mizara fanafody ho an'ny olona ao an-toerana. Tsy andriny ny handray andraikitra bebe kokoa.
“Tena mientanentana aho ny hanomboka ny asako vaovao eto Etazonia ho mpanampy mpitsabo,” hoy i Tsegay.
Rehefa niasa mafy tao anatin'ny volana maro izy dia naharay filazana fitsapana hidirana ho mpianatra mpanampy mpitsabo izy. nijoro teo anoloan'ny kilasy i Tsegay ary nilaza tamin'ny mpiara-mianatra aminy hoe: “Vitako ary ary fantatro fa hahavita toy izany koa ianareo.” Nihoraka ary nitehaka izy ireo.
Afaka fanadinana i Tsegay ary lasa mpanampy mpitsabo.
Mandritra izany fotoana izany, mahafantatra ilay dokotera Irakiana Ali Mufrej fa manana 12 taona izy vao afaka mankalaza. Tsy nisafidy izany manokana izy. “Izay no lalàna,” hoy izy. “Izay no dingana, ary tsy maintsy manaraka izany aho.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/12/98002/
 Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org: https://www.pri.org/stories/2017-03-30/organizations-try-fight-brain-waste-and-get-highly-trained-immigrants-back-work
 Anna Boiko-Weyrach: https://www.pri.org/people/anna-boiko-weyrach
 manana herijika loatra: http://www.migrationpolicy.org/research/untapped-talent-costs-brain-waste-among-highly-skilled-immigrants-united-states
 Foibe Tongasoa Indray: http://www.edcc.edu/welcomeback/
 foibe fanovozam-pahaizana miisa 11: http://www.welcomebackinitiative.org/wb/about/centers.html
 Foibe Tongasoa Indray: https://welcomeback.highline.edu/